रक्षा नेपालकी मेनुका थापालाई खुल्लापत्र - Merodesh.news
रक्षा नेपालकी मेनुका थापालाई खुल्लापत्र
मेनुका थापा, रक्षा नेपाल
प्रदिप घिमिरे एक्लै बसेको केटा मान्छे होइन । उ, श्रीमती, प्रत्युसा (छोरी), बहिनी (प्रिनन), भाई (नविन) सबै एकैसाथ बस्दै आएको व्यक्ति हो । यदि हाम्रो दैलोमा कसैले मलाई हजुरहरुको सहयोगको खाँचो छ, म अन्यायमा परेँ भनेर सहयोग माग्दै खट्खटाउँछ भने उसका लागि हाम्रो दैलो सँधै नै खुल्ला रहन्छ । यो त तपाई आफैले सिकाउनु भएको हो नि, सहयोग गर्नुपर्छ भनेर होइन र ? के अब प्रदिपले यहि काम गर्दा चाहिं ऊ अपराधी भयो ? ‘मलाई रक्षा नेपालबाट निकालियो, अब म त्यहाँ बस्न सक्दिन’ भनेर हाम्रो ढोकामा आएकी पुजालाई मैले बस्न आश्रय दिँदा हाम्रो परिवार दोषी वा अपराधी हुन्छ भने प्रदिप घिमिरे मात्र हैन म, छोरी, भाई, बहिनी सबैलाई दोषी ठह¥याउन रक्षा नेपाललाई नै प्रयोग गर्नुहोस् । हुनत तपाईले सामूहिक बलात्कारदेखि श्रीमानको पिटाइ सहन नसकेका महिला दिदी–बहिनीहरुको उद्धार गर्नु भएको छ, यसमा कसैको दुई मत छैन, तर त्यही बलात्कारमा परेका ति पीडित नानी, बाबुहरुलाई कोही सहयोगी हातहरु त्यहाँ पुगे भने रुँदै कराउँदै उनीहरुका सामुन्ने दुई हात जोडेर सहयोग माग्न लगाउँदा उनीहरुमाथि मैले कुनै प्रकारको दवाब दिएको छैन् कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ? त्यो कुरा त तपाईकै संस्थामा आश्रित मुक्ताको टाउकोमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ ? विदेशीबाट पैसा लिएको छैन भनेर ?
तपाईले पुजालाई मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको, जे पनि भन्छे भनेर आरोप लगाएको सुन्दा म मात्र होइन् पुजालाई भेट्ने जो कोही पनि अचम्ममा परिरहेका छन् । हो उसमा पहिला मानसिक सन्तुलन ठिक थिएन होला । उनको पीडा तपाईले पनि बुझ्नु भएकै होला । तर, उनी अहिले आफैमा सम्मालिएकी छिन् भने कसरी उनी सन्तुलनबिहिन भइन ? यसको प्रमाण विदेशमा गई तेक्वान्दो खेलेर जितेर ल्याएको गोल्डमेडल देखि उसका विद्यालयका सर्टिफिकेटहरु नै साक्षी छन् ।
तपाई त यतिसम्म झुट बोल्नुहुन्छ कि त्यो हामी कल्पना पनि गर्न सक्दा रहेनछौं । २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पको बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबैलाई थाहा छ । तर, तपाईले खै कुन कुरालाई प्रमाणित गर्न हो पटक–पटक २०७१ सालमा भूकम्प गयो भनिरहनु भएको छ । अर्को कुरा जब त्यहाँ रहेका पीडितहरु नै असन्तुष्ट छन् भने पाँच÷छ करोडको सम्पति जोड्नु भएको के औचित्य ? त्यसमाथि पनि पीडितका नाममा आएको रकमले आफ्नै नाममा घर किन्नु भएको छ । अझै पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न प्रयासरत हुनुहँुदो रहेछ, विभिन्न बहाना बनाएर । सतुङ्गलमा भएको भनिएको घर तपाईको नाममा हुनुपर्ने हो कि संस्थाको नाममा ? अनि तपाइको नाममा रहेको धापाखेलको घर नि ? यो पनि त सुन्नमा आएका छन् । तपाई आफैले पनि त संस्था शुरु गर्दाका दिनहरुमा आफूसँग केही नभएको भनेर मिडियाबाजी गर्नु भएका तथ्यहरु अझै छर्लङ्गै छन् । अनि अहिले चाहिं कहाँबाट आए दुई÷दुई ठाउँमा घर ?
संस्थामा रहेका भाई–बहिनीहरुको आफन्त भेट्न आउँदा तपाई एवम् तपाईका सहकर्मीहरुले गोदावारी सेल्टरमा राखिएको कुरा भन्नु हुन्थ्यो, खै गोदावारीम सेल्टर होम कहाँ छ ? नेपाल सरकारले छानविन समिति निर्माण गर्दागर्दै पनि तपाई कानुन भन्दामाथि उठेर कसैलाई अपराधी भन्ने अधिकार कहाँबाट पाउनु भयो ? हुनत तपाई पुजाको लागि लड्नुभयो । तर, खै त्यसको उपलब्धि ? पुजा निकालिनु नै हो त ? पुजा, तपाई र रक्षा नेपालको बारेमा यति धेरै तथ्य बाहिर आइसक्दा पनि अझै तपाईले राष्ट्रिय मिडियामार्फत प्रदिप घिमिरेलाई दोषी सावित गर्न अनेकौ प्रपञ्च रच्दै हुनुहुन्छ । यदि प्रदिप घिमिरेलाई तपाइसँग व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुष्मनी हुन्थ्यो भने पुजा त्यहाँबाट बाहिर निकालिनु भन्दा अगाडी नै तपाइकोविरुद्ध खडा हुने साहस राख्थे होलान् । तपाईको विषयमा त हामी प्रिनम बहिनीबाट दुई वर्ष अगाडी नै जानकार थियौं ।
त्यो बेला तपाईको समाजसेवा प्रतिको लगनशीलतालाई हृदयमा राखेर नै कुनै कुरा बोल्न चाहिन । तपाई भन्नुहुन्छ कि घर किनेको ऋण तिर्न गाह्रो परिरहेको छ । कुन बैंकबाट कति लिएको हो ? लिँदाको मितिसहित कागजात किन बाहिर ल्याउन सक्नु भएन ? तपाईको संस्था बालगृह हो वा ट्रान्जिट होम ? के मा र कहाँ दर्ता छ ? प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको सिफारिस बिना बालबालिका त्यहाँ राख्ने अधिकार तपाईलाई कसले दियो ? के तपाई कानुन भन्दामाथि हो ? के तपाईलाई यो मुलुकमा कानुन लाग्दैन ? अझै तपाई समाज सेवा गरेको भन्दै हरेक क्षेत्रमा अफू नै ठूलो हो भन्दै हुनुहुन्छ । यदि त्यस्तै हो भने लैनचौरमा तपाईलेप्रति महिना ५० हजार भन्दा माथिको रकम तिरिरहनु भएको छ, के त्यो कार्यालयलाई सतुङ्गलमा रहेको भनिएको घरमा किन सार्न सकिँदैन ? त्यो पैसाले अन्य चेलीको उद्धार गर्न सकिन्थ्यो नि । तपाईले प्रदिप घिमिरेले बहिनीलाई पटक–पटक बलत्कार ग¥यो भनिरहँदा रक्षा नेपालमा आश्रित ति पीडित नानीहरुलाई बार–बार टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका विभिन्न डकुमेन्ट्री तथा राष्ट्रिय मिडियाका अन्र्तवार्ताहरुमा बनावटी कुरा बोल्न लगाउँदा र ढिक्काका ढिक्का आँशु खसाल्न लगाईंदा चाहिं तपाईले कति जना नानीबाबुहरुलाई बलत्कार गर्नुभयो ?
के प्रदिप घिमिरेले बहिनीको न्यायको लागि लड्दा अपराधी हुने भए तपाईले गर्नुभएका यस्ता कामहरुमाथि चाहिं प्रश्नचिन्ह खडा हुदैन र ? प्रदिप घिमिरे कोही नेता, पत्रकार, करोडपति नभएर एक साधारण व्यक्ति हो । जसले न्यायका लागि माग गरिरहेको छ । उसले कहिँकतै पनि आफ्नो संस्था र संस्थागत धारणा प्रस्तुत गरेका छैनन् । तपाईले जसरी विश्वास नेपाललाई नै गलत ठह¥याउन मिडियाबाजी गरिरहनु भएको छ, त्यसरी प्रदिप कहिल्यै पनि रक्षाको विरुद्धमा लागेका छैनन् । प्रदिपले त केवल मानबताको नाताले पुजालाई सहयोग मात्र गरिरहेको हो । विश्वास नेपाल आफ्नो विधान र उद्देश्य पूरा गर्न निरन्तर अगाडि बढिरहेको संस्था हो, जसलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको छ । तपाईको रक्षा नेपाललाई जस्तै । अनि किन विश्वास नेपालको पछाडि लाग्नु हुन्छ ?
– तुलसी भण्डारी